Sales & Distribution Manager Archives - Glory Assumption Space
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ (2) Head Of Sales & Distribution Manager -M/F(5)Posts/လစာ-၅၀၀,၀၀၀/-ကျပ်/ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ MBA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ Sales & Marketing နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ Head Of Sales & Distribution Managerနှင့် အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။Personality & Communication Skill, Interpersonal Skill, Sale & Marketing Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ English (4) skill ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ Advance Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ Department တစ်ခုလုံးအားကောင်းစွာ Management လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ နယ်သို့ ခရီးသွားနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ Under Pressure အောက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Distribution Manager - Male (5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales & Distribution Manager – Male(5)posts/Salary-500000Ks/Dagon Township. -MBA ဘွဲ့ရိရမည်။ Sale & Marketing နှင့် ပက်သက်သော Diploma ရရှိရမည်။ -Sale & Marketing နယ်ပယ်တွင် လုပ်သက်(၅)နှစ်ရှိရမည်။ Communication Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ -မိမိလက်အောက်ရှိ RSA,ASM များကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီးနယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းသွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_1346" align="alignnone" width="400"] ProEXR File Description
cameraFNumber (float): 6.262425
cameraFarRange (float): 500.000000
cameraFocalLength (float): 62.624252
cameraFov (float): 32.072327
dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 4499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 4499]
tiles (tiledesc): [32, 32]